Nepal – Page2– Nepal Reports
ओम र मनास्लुको एकीकृत कारोबार
ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र मनास्लु विकास बैंक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ओम र मनास्लुको संयुक्त कारोबार शुभारम्भको शुक्रबार उद्घाटन गरे । राष्ट्र बैंकले यही असारभित्र पु¥याउन भनेको साढे २ अर्ब चुक्ता पुँजीको लक्ष्य चुम्न ओमलाई अब समस्या नहुने भएको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद […]
अर्जुन गिरी- २२ जेठ २०७३ मा पोखराकै १ सहकारीको नाममा भएको चेक लिएर ग्राहक कैलाश विकास बैंकको न्युरोड शाखामा पुगे । २० लाख रुपैयाँ भुक्तान लिन अन्तिममा ४६ नम्बर भएको चेक लिएर उनी त्यहाँ पुगेका थिए । उक्त नम्बरको चेकबाट पहिला नै लामाचौर शाखाबाट रकम भुक्तानी भएको बैंकको सिस्टममा देखियो । टेलरका कर्मचारीले लामाचौर शाखाका […]
सुरेशराज अधिकारी- पोखराका सडकमा हिँड्दै गर्दा अनौठा अनौठा कुरा तपाईंले देख्नुहुनेछ । यतिसम्म कि सडकबाटै तपाइँले होटलका मेनु पाउनुहुनेछ । होटल छिर्दा वेटरले मेनु तेस्र्याएर अर्डर माग्छ । तर, पोखरामा परिकारको मूल्य थाहा पाउन बिजुलीका पोलतीर हेरे पुग्छ । चिप्लेढुंगा–महेन्द्रपुलतिर पुग्नु भो भने सडकमा ठड्याइएका बिजुलीको पोलबाटै कति रुपैयाँमा के खाने हो भन्ने होटलका परिकारका […]
June 12, 2017 Arjun Giri
क्षेत्रीय नाकाबन्दीका कारण अभाव खेपिरहेको कतारका लागि इरानले ५ वटा विमान खाद्यान्न पठाएको छ । इरानको मुख्य विरोधी साउदी अरबसहित केही मुलुकले कतारसँग सम्बन्ध तोडेका छन् । कतारले आतंकवादलाई सहयोग पु¥याएको उनीहरुको आरोप छ, जुन कतारले अस्वीकार गर्दै आएको छ । कतारमा आउने खाद्यान्नको ४० प्रतिशत उसको जमिन जोडिएको छिमेकी साउदीबाट आउँथ्यो । इरान एअरका […]
जोगिएला शीतलमार्ग बस्ती ?
गोविन्द सुवेदी- छोरेपाटन शीतलमार्गका मोहनबहादुर विश्वकर्मा यो बर्खामा आफ्नो घर डुबान पर्दैन कि भन्ने आशामा छन् । पोहोर असारमा परेको पानीले शीतलमार्ग र आसपासका दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा पा¥यो । स्थानीय संगठित भए अनि खोजे बस्ती जोगाउने उपाय । नगरपालिका, जिविस मात्र नभएर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगे उनीहरु । बस्ती नै खतरामा परेपछि जोगाउन अर्थ मन्त्रालयले […]
शर्मालाई थप ६ दिन थुनामा राख्न निर्देशन
भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई थप ६ दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।अनुसन्धानको प्रकृति, गम्भीरता र जटिलतालाई हेरेर शर्मामाथि थप अनुसन्धान गर्न ६ दिनको म्याद थप गरिएको विशेष अदालतका रजिस्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । अख्तियारले शर्मामाथि अनुसन्धान गर्न एक […]